Arle Uein uthi
I abe bug entsha kanye nalowo mbiko entsha (0.6.3) kanye Mailpress plugin. Lapho sifuna sibonise omunye izinguqulo kwekhasi, kukhona iphutha :
Isixwayiso: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Engabhalisiwe Umlayezo Iphutha in Entity, Popular: 4 in / wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php on line 7
Isixwayiso: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: PCDATA elingalungile Char value 1 in Entity, Popular: 4 in / wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php on line 7
Isixwayiso: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: PCDATA elingalungile Char value 3 in Entity, Popular: 4 in / wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php on line 7
Isixwayiso: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Kulandzelanisa ']]>’ akuvumelekile okuqukethwe Entity, Popular: 4 in / wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php on line 7
Isixwayiso: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: zangaphakathi errorExtra wokuqukethwe ekupheleni lo mbhalo ku Entity, Popular: 4 in / wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php on line 7
Iphutha fatal: Ngibize a hasAttributes ilungu umsebenzi() on a non-into in / wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php on line 50
I ezifakiwe ukuthi plugin futhi wayengeke abone ukungqubuzana, Ngicabanga I am ulahlekile into endaweni ethile.
I ukungqubuzana kubangelwa indlela Transposh isebenzisa ukuhlanganisa zibe gettext (ngokungeza lezo chars futhi kamuva nokususa kubo) ngokuvamile izingxabano usuke echaza akumele kwenzeke.
Ungase wengeze ongakhetha kukho “khubaza gettext ukuhlanganiswa” …
Yebo, ukuqagela Ngizokhuluma uyifaka kwi-version olandelayo
Edward Mugits uthi
Ngiyakuthanda ukuthi yini i bakubone noma bakufunde lapha, nje engeyena bakwazi ukuba kusebenze. Ukuthola ukulungele babe ikhofi lami indawo olusha ukuze WP zakamuva futhi lokhu ipulaki-in for ukuhumusha kumelwe ngami. Lapho elihunyushwe, kuyoba ukubuyekeza bese populate ikhasi njengokungathi zaba ikhasi esiyingqayizivele? Uma Kwadingeka 20 amakhasi e-Japanese ngesiNgisi olimini, bekungaba i ukwazi ukusebenzisa ikhasi elihunyushwe ukudala ikhasi sangempela bese ugcine kuso njengoba manje ikhasi ephilayo futhi unika amandla full nokwenza kahle meta?
Ngidinga website yenziwe futhi ngifuna nifaka lesi sici, muntu avialable ukucaphuna lokhu?
Ikhasi elihunyushwe kuba ikhasi langempela noma iyiphi injongo esisebenzayo, Angazi ukuthi yini mean ncamashi by full nokwenza kahle meta kodwa ngokuqinisekile Ngithemba kusebenza
(sorry for IsiZulu zami)
Ukuze web yami sula i setha ngolimi yasePoland ukuba ngokuzenzakalelayo. Lapho beshintsha lang kwamanye, I Get elihunyushwe kule lang isihloko widget “Ukuhumusha” kanye okukhethwa kukho “Beka njengoba iphutha kolimi” futhi “Hlela Translation”
isib. for Deutsh > Ukuhumusha, Beka njengoba iphutha kolimi
Kodwa lapho i ishintshe kuya ngesiPolish (ezenzakalelayo my lang) lo mbhalo ngesiNgisi, hhayi sula. 🙁
Kungani elingekho iwijethi translation for defalut lang uma iphutha kuyinto ngaphandle IsiZulu?
Lokhu kuyokwenziwa fixed in the version ezayo (0.6.4) ngokushesha
Sawubona, Nginenkinga ne ngesiNorway nb_NO. Umsebenzi in buddypress Ufika elihunyushwe kuphela umsebenzi wokuqala, zonke ezinye umsebenzi isala IsiZulu…Noma iyiphi imibono?
Ngiphinde uthole ikhasi elingenalutho kwabanye zezilimi…Ngiyabona nika ukufinyelela kwakho ku-emphakathini wami yangasese uma ufuna ukuhlola ukuthi kungani?
Empeleni kungcono ngolimi abangenawo amafayela noma yikuphi. Mo. Ngithola ikhasi elingenalutho…
Sawubona, in the isengezo impi ukumiswa, umlawuli my web anda le memory_limit php_admin_value kuya 128 futhi manje usebenza… Ngakho ungase kwesokudla, it nephutha inkumbulo! Thx usizo lwakho!
Thokozani ngakwazi ukusiza
Yebo, thx godu!
Namanje uthole inkinga Nokho, lapho enginakho amafayela buddypress kolimi…NgesiNorway isibonelo, umsebenzi wokuqala kuphela lihunyushwe, bonke abanye akayona…noma yimaphi imibono?